Warning Message for ArrayList in Java — MYSTERY ZILLION
Warning Message for ArrayList in Java
Array မှာ fixed value မဖြစ်ဘဲ array size ကို grow & shrunk ဖြစ်အောင် ArrayList ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့. စမ်းကြည့်တာ..
Note: ArrayListDemo.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint: unchecked for details. ဆိုပြီး warning ပြနေလို့ပါ.
အရင်code အဟောင်းပုံစံတွေများပါနေလို့လားဆိုတာ ကူညီပြီး ပြောပြပေးကြပါဦးလို့.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
System.out.println("Initial size of al:"+al.size());
System.out.println("Size of al after additions:"+al.size());
System.out.println("Contents of al:"+al);
System.out.println("Size of al after deletions: "+al.size());
System.out.println("Contents of al: "+al);
ArrayList မှာ အထဲမှာသိမ်းမယ့် Datatype တွေကိုမပြောပေးခဲ့ရင် သူကအထဲမှာ ဘယ်လို Datatype အမျိုးအစားပါမယ်မသိတဲ့အတွက် unsafe warning ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် warning မဖြစ်စေချင်ရင် ကိုယ်သိမ်းမယ့် Datatype အမျိုးအစားကို ထည့်ပြောပေးခဲ့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့.. ရသွားပါပြီ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..
reference က http://www.java-samples.com/showtutorial.php?tutorialid=234 ဆီကပါ